Tirada dadka u dhashay British-ka ee codsaday baasaboorka Irish-ka oo korodhay… – Hagaag.com
Tirada dadka u dhashay British-ka ee codsaday baasaboorka Irish-ka oo korodhay…
Posted on 31 Diseembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Tirada dadka u dhashay Britishka ee codsaday baaboorka Irish-ka si ay uga mid noqdaan muwaadiniinta Midowga Yurub ayaa korodhay. Ku dhowaad 100,000 oo British ayaa dalbaday jinsiyada Irish-ka sanadkan.
Sannadkii hore waxaa dalbaday 81,000. Sannadkii ka horreeyay oo dadka Ingiriiska ay u codeeyeen Brexit waxaa dalbaday baasaboorka Irish-ka 46,000 oo British ah, sida uu wariyay wargeyska The Guardian Isniinta maanta ah.
Qof kasta oo ku dhashay Jamhuuriyadda Ireland ama Waqooyiga Ireland ama dhaleen waalid Irish ama awoowe u yihiin waxa ay codsan karaan baasaboorka Irish-ka ah. Taasi waxay khuseysaa ilaa lix milyan oo Ingiriis ah. Waxaa laga yaabaa inay heystaan laba jinsiyadood.
Tirada la diiwaangeliyey ee dooneysa baasaboorka Irish-ka oo ka socda muwaadiniinta waqooyiga Ireland ayaa kor u kacay boqolkiiba 2 sannadkan. Northern Irish waxay codsan karaan baasaboorka Ingiriiska iyo Irishka labadaba.
UK ayaa ka bixi doonta Midowga Yurub 29-ka Maarso. Bisha Jannaayo dhexdeeda ayaa Baarlamaanka Ingiriiska u ballansan yahay in ay cod u qaadaan heshiiska Brexit ee wadata Ra’isul wasaaraha Britain Theresa May, waxaa weli suuragal ah in lakala baxo iyadoo aan heshiis la gaarin.